चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध तयार हुन ताइवानको पाँच दिने युद्ध अभ्यास! - Dainik Online Dainik Online
चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध तयार हुन ताइवानको पाँच दिने युद्ध अभ्यास!
प्रकाशित मिति : २८ भाद्र २०७८, सोमबार ४ : १५
चीनबाट आक्रमण हुनसक्ने भन्दै ताइवानले पाँच दिने ‘वार गेम’ युद्ध अभ्यास सोमबारदेखि सुरुवात गरेको छ। ताइवानले सुरुवात गरेको युद्ध अभ्यास यस वर्षकै महत्वपूर्ण सैन्य गतिविधि हो।
‘हान क्वाङ’ नाम दिइएको यस पाँच दिने युद्ध अभ्यास ताइवानका शीर्ष अधिकारीहरु अमेरिकामा सुरक्षाको विषयमा छलफल गर्न गएको भोलिपल्ट भएको हो।
चिनियाँ जनमुक्ति सेनाबाट आक्रमण भए कसरी त्यसको प्रतिकार गर्ने भनेर युद्ध अभ्यास भइरहेको हो। चिनियाँ पक्षले आक्रमाण गरेको खण्डमा सेनाहरुलाई आफ्नो लडाई क्षमता रक्षा गर्न सिकाइनेछ।
चीनले गर्नसक्ने हवाई आक्रमण, जल तथा थल आक्रमणका साथै बायो–केमिकल आक्रमणविरुद्ध ताइवानले आफ्नो सेना तयार गरिरहेको हो।
जिसान बेस हुवालिनको पहाड मुनी निर्माण गरिएको छ। यहाँ २ सय युद्धक विमान राख्न सकिन्छ। ताइवानका सेनाले राति पनि चीनबाट आक्रमण हुनसक्ने भन्दै युद्ध अभ्यास गर्नेछन्।
बुधबार युद्धक विमानहरुलाई आकस्मिक रुपमा अवतरण गर्न सिकाइनेछ।
ताइवानले पनि चीनको सम्भावित आक्रमणविरुद्ध युद्ध अभ्यास गरिरहेको हो। एससीएमपी